Ambiansy: Torohevitra momba ny vokatra ilaina amin'ny atiny | Martech Zone
Ambiansy: Torohevitra momba ny vokatra ilaina amin'ny atiny
Alakamisy, Jolay 24, 2014 Alakamisy, Jolay 24, 2014 Douglas Karr
Misy tontolon'ny atiny mivoaka isan'andro izay mitombo isan'andro. Ny ankabeazan'ny paikadim-barotra amin'ny vokatra dia ny fahazoana ny hevitry ny vokatra aparitaka manerana ny tranonkala, hisarika ireo mpamaky ireo hiverina amin'ny pejin'ny vokatra ary avy eo manosika ny mpamaky hiova. Ny sehatra ecommerce an'i Sophia Ambiance ™ dia mampiditra ny sarin'ny vokatra sy ny tolo-kevitra ao anaty ny atiny - nohamarinina hijerena sy mifanaraka amin'ny atiny noresahina. Izany dia mitondra fihenam-bidy lehibe kokoa noho ny tranokala Sophia.
Ambiance ™ dia e-commerce widget izay mipetraka tsy manara-penitra miaraka amin'ny atiny mpanonta mba hampisehoana ireo vokatra mahaliana mahaliana ny mpamaky eo am-pitetezana azy ireo. Amin'ny alàlan'ny famindrana ny atiny dia manome onitra fidiram-bola hafa ho an'ny mpanonta izy ary satria ny vokatra dia mameno ny atiny akaiky, ny mpamaky dia mirona kokoa avy hatrany mitarika amin'ny hatsaran'ny tranokala sy ny fitomboan'ny tsy fivadihana.
Fampivoarana mahaliana ity eo amin'ny tranonkala, manambatra ny traikefan'ny pejin'ny vokatra sy ny tranokala miantsena miaraka amin'ny fampahalalana sy ny toe-javatra atiny lehibe. Ireo mpampanonta izay manoratra atiny lehibe dia afaka mahazo vola bebe kokoa aminy. Ary ireo tranonkala ecommerce izay manana vokatra antenain'izy ireo hampiroborobo manerana ny tranokala famoahana dia manana fotoana ahafahana mahita ny vokatr'izy ireo ary tsindrio-through.
Tags: mpanao dokam-barotraambiencefiantsenana matanjaka amin'ny atinyWidget e-varotraWidget ecommercetolo-kevitra momba ny vokatrampitoryBodo